Zvinyorwa zvaJack Poyntz pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Jack Poyntz
Jack Poyntz Studio ndeye webhu dhizaini kambani uye yakasimbiswa Shopify Nyanzvi. Ivo vakatarisana mukuendesa ekugadzira webhusaiti mhinduro kubatsira makambani ane chinzvimbo kukura online. Vanogamuchira matambudziko matsva nechishuwo chekubatsira vatengi vavo kuti vabudirire.
5 Anoshanda Anoshandura Kutendeuka Kwekuvandudza Matipi Anokunda Iwe Vatengi
NeChishanu, Kurume 8, 2019 Chitatu, October 14, 2020 Jack Poyntz
Mabhizinesi anofanirwa kukwidziridzira yavo nharembozha mhinduro kuti vaende kumberi kwemutambo. Ndiwo mugero wekutanga uko vanhu vazhinji vanoenda kunotsvaga iri pedyo kofi shopu, akanakisa ekuvaka denga, uye chero chinhu chinosvika Google.